Kônsily voalohany tao Nikea - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Konsily voalohany tao Nikea)
Ny Kônsily voalohany tao Nikea na Kônsily voalohany tao Nisea dia fivoriamben'ny eveka (kônsily) natao tamin' ny taona 325 ka ny emperora Kônstantino I no nampiantso azy. Io no kônsily voalohany. Izany dia natao mba handraiketana ny maha Andriamanitra an'i Jesoa Kristy ka hanoherana ny fampianaran'i Ariosy (arianisma) izay noheverina ho fampianaran-diso tamin' izany fotoana izany. Notapahina tao amin' io kônsily io fa mitovy fomba (homoousia) amin' ny Ray ny Zanaka amin' ny maha Andriamanitra ny Ray sy ny Zanaka. Navoaka ny Fanekem-pinoana nikeana. Araka ny lovantsofina dia i Nikôlasy avy any Mira (izay fantatra amin' ny hoe Masindahy Nikôlà) sy i Spiridôna avy any Trimitonta dia nandray anjara betsaka tamin' io kônsily io.
1 Ny fanekeam-pinoana nikeana
Ny fanekeam-pinoana nikeana[hanova | hanova ny fango]
Ny Fanekem-pinoana nikeana na Fiekem-pinoana niseana dia fanekem-pinoana tinapaka nandritra ny Konsily tao Nikea izay naitatra nandritra ny Kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly tamin' ny taona 381 ka indraindray dia antsoina hoe "Fanekem-pinoana nikeana-kônstantinôpôlitana".
Lohahevitra[hanova | hanova ny fango]
Mizara fehezan-kevitra telo izy, dia
ny finoana an' Andriamanitra Ray sy
ny finoana an'i Jesoa Kristy ary
ny finoana ny Fanahy Masina.
Izany dia entina hamaritra ny finoana ny maha Telo Izay Iray na Trinite an' Andriamanitra.
Vontoatiny[hanova | hanova ny fango]
Ity ilay fanekem-pinoana nikeana voalohany tamin'ny Konsily tao Nikea tamin'ny taona 325 . Tsy ny hoe izaho fa ny hoe isika no mpisolo tena ilazana ny mpino tamin'io:
Mino an’Andriamanitra Ray tokana tsitoha isika, izay mpamorona ny zava-drehetra na ny hita na ny tsy hita.
Sy ny Tompo Jesosy Kristy tokana, Zanaka Lahitokan'Andriamanitra, nateraky ny Ray, izany hoe avy amin’ny sobstansan'ny Ray, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina; nateraka fa tsy natao, miray sobstansa amin’ny Ray, amin’ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany; ka ho antsika olombelona sy ho an’ny famonjena antsika no nidinany ho tonga nofo sy tonga olombelona; nijaly, nitsangan-ko velona tamin’ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, ary ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty.
Ary ny Fanahy Masina.
Izay rehetra miteny hoe: "nisy fotoana tsy nampisy azy: tsy nisy izy talohan'ny nahaterahany; natao mitovy amin'ny zavatra avy amin’ny tsy misy izy; sobstansa sy maha-izy-azy hafa izy, noarîna izy; mety miova sy mety iharan'ny fiovana ny Zanak'Adriamanitra", dia manozom-panamelohana azy ny Fiangonana manerana izao tontolo izao sy apostolika.
Ny Ôrtôdôksa sy ny Katôlika ary ny ankamaroan'ny fiangonana prôtestanta na ireo fiangonana nipoitra avy aminy dia manaiky sy mampiasa io fanekem-pinoana io. Nisy fiovany izy taty aoriana tamin'ny nampidiran'ny Fiangonana tandrefana ny hevitra hoe "nivoaka tamin'ny Zanaka koa ny Fanahy Masina" izay nomena ny anarana latina hoe Filioque (grika: καὶ τοῦ Υἱοῦ / kaὶ toū Uioū).
Kônsily faharoa tao Nikea
Kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kônsily_voalohany_tao_Nikea&oldid=1009679"
Voaova farany tamin'ny 15 Martsa 2021 amin'ny 13:04 ity pejy ity.